क्याप्टेन लामा निलम्बन र फुकुवाको मन्तर्कथा- ‘विजय नेभर बिकम पराजय, थ्यांक्यू पेसेन्जर !’ « Gajureal
क्याप्टेन लामा निलम्बन र फुकुवाको मन्तर्कथा- ‘विजय नेभर बिकम पराजय, थ्यांक्यू पेसेन्जर !’
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०७६, मंगलवार ०५:०१
‘क्याप्टेन बिजय लामा निलम्बनमा परे ।’ यो समाचारले हिजो दिनभर बजार तात्यो । यही तातोमा धेरैले प्रतिकृया पकाए । कसैले ‘ओली सरकारले राम्रा मान्छे छानी छानी लखेट्यो’ भने । कसैले ‘लामाले पदीय मार्यादा बाहिर गएर काम गरे’ भने । कसैले ‘हवाई माफियाको खेल’ भने । कसैले ‘नेवानीकोे खानी षडयन्त्र भएको’ प्रतिकृया दिए ।
कृया–प्रतिकृयाको रोटी पाक्न नपाउंदै समाचारले कोल्टे फेर्यो । अर्थात्, क्याप्टेन लामाको निलम्बन फुकुवा भएको खबर आयो । केहीले ‘बिजयसंग ओलीको पराजय’ भनेर लेखे । केहीले ‘लामाले मामासंग माफी मागे’ भने । कसैले ‘सरकार ढाल्ने सुनियोजित सल्लाह’ ठाने भने केहीले ‘हल्लामात्र’ माने ।
कुरोको चुरो बुझ्न हामीले ठुलो प्रयास गर्यौं । ‘बिजय लामाले पदीय मर्यादा नाघेकै हुन् त ?’ गजुरियलको प्रश्नमा एक अधिकारीले भने, ‘नाघेकै त हैनन्, नाघ्न खोजेकाले मर्यादाको ढोका देखाई दिएको हो ।’ अधिकारीपछि हामीले पौडेललाई प्रश्न गर्यौं, ‘मौरीमाथी अरिंगाल खनिन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘सराकार के अरिङ्गाल ! अरिङ्गाल त क्याप्टेनका फ्यानहरु रहेछन्, उड्ययनमन्त्रीलाई झण्डै उडाई दिए !’
संस्कृति मन्त्रालयले भने फरक तर्क दिएको छ । क्याप्टेन लामालाई गरिएको निलम्बन ‘सत्ताको दुरुपयोग र भत्ताको प्रयोग’ भन्ने नाटकको रिहर्सल हो । लोकतन्त्र निर्देशित यस नाटकमा एक बिद्रोही कर्मचारी र दुई तिहाई सरकारको कथा समेटिएको छ । नाटकका निर्देशक भन्छन्, ‘सरकार र कर्मचारीको लडाईंले सेवाग्राहीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा यो नाटकमा समेटिएको छ ।’
‘क्याबिन क्रु, बि सिटेड फर ल्याण्डिङ् !’ भन्दै गजुरीय सम्पर्कमा आएका क्याप्टेन लामाले भने– ‘आई एम सेफली लेण्डेड एट नेपाल वायुवा एयरपोर्ट, थ्याङक्यू फर फ्लाईङ् वीथ मी !’
खास कुरो के हो त ? हामीले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रमुखलाईं सम्पर्क गर्न खोज्यौं । लामो प्रयासपछि उनकी नीजि सचिव कोईलीदेवीले भनिन्, -‘तपाईंले डायल गर्नु भएको नम्बर अहिले ब्यस्त छ । केही समयपछि सम्पर्क गर्नुहोला, धन्यवाद !’